महाशिवरात्रिको दिन गर्नुहोस् यी कामहरु, हुनेछ मालामाल ! -
यस वर्षको महाशिवरात्रिको तिथिलाई लिएर कुनै राय छैन। मान्छेहरु यो पटक महाशिवरात्रि १३ फेब्रुअरीमा मनाउने कि १४ फेब्रुअरीमा मनाउने भन्नेबारे द्दिविधामा रहेका छन्, तर तपाई चिन्तित हुनु पर्दैन। तपाई जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यही रितिथिति अनुसार ब्रत बस्नुहोला।
जान्नुहोस १३ र १४ फेब्रुअरी शिवरात्रि मनाउनुको कारण:
जो मानिस १३ फेब्रुअरीको महाशिवरात्रिको व्रत बस्छन, उनीहरुलाई धेरै ब्रतका पुण्य प्राप्त हुनेछ। पहिलो संयोग यो हो कि १२ तारिखको मध्यरात पछि सूर्य संक्रान्ति रहेको छ। सूर्यले आफ्नो राशि परिवर्तन गरी मकरबाट कुम्भ राशिमा जान्छ। यसकारण १३ तारिखमा संक्रान्तिको पुण्यकाल रहन्छ। १३ फेब्रुअरीको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो संयोग यो हो कि यो दिन मंगलबार पर्छ। यसका साथै पूरै दिन त्रयोदशी तिथि छ र रातको ११ बजेर ३५ मिनेटमा चतुर्दशी तिथि छ। मंगल र त्रयोदशीको संयोगबाट भौम प्रदोष व्रतको संयोग बनेको छ।
यो ब्रतले आरोग्य र सन्तानको सुख प्रदान गर्दछ। १३ फेब्रुअरीको महाशिवरात्रि ब्रत बस्दा भौम प्रदोषको ब्रतको पनि पुण्य प्राप्त हुन्छ र मंगलबारको ब्रत पनि पूरा हुनेछ। यानि शिवजीको साथै हनुमानजीको पनि कृपा प्राप्त हुनेछ। तेस्रो शुभ संयोग यो हो कि यस दिन कार्य सिद्धि योग पनि बनेको छ। यानि जसले मनोरथले शिवको पूजा गर्छ उसले सोचेको कुरा सिद्ध हुनेछ। यस दिन कुनै पनि शुभ कार्य गर्दा सफलता मिल्छ।
तर जसले १४ फेब्रुअरीको महाशिवरात्रिको ब्रत बस्छन, उनीहरुले तिथि र तारिखका अद्भुत संयोग मिल्नेछ जुन अत्यन्तै दुर्लभ छ। यस दिन तिथि पनि १४ (चतुर्दशी) हुनेछ र तारिख पनि। यसको साथै १४ फेब्रुअरीमा भगवान शिवको प्रिय नक्षत्र श्रवण पनि छ। यस नक्षत्रमा शिवजीको पूजा गरेमा अत्यन्तै शुभ र फलदायी मानिन्छ। १४ फेब्रुअरीमा महाशिवरात्रिको ब्रत बस्ने व्यक्तिलाई संक्रान्तिको शुभ फल प्राप्त हुन्छ किनकी यस दिन बुध कुम्भ राशिमा आउनेछ र सुर्यलाई भेट्नेछ।
Previous फागुन ४ सूर्य ग्रहण विशेष: ग्रहणपछि यी ४ राशि हुनेहरुको चम्किनेछ भाग्य!
Next आफ्नो मनोकामना पूर्ण गर्न चाहनुहुन्छ भने महा‍शिवरात्रिमा चढाउनुहोस् यी बिशेष वस्तु!